Wasaaraada Deegaanka iyo UNDP oo Burjikayaal u qaybiyey Barakacayaasha Garoowe. | MOEACCPL
Charcoal Awareness / Proscal / Warka
22nd May 2019 at 10:52 am By Abdikani Hayir
ayaa saaka kawada qaybgalay Munaasabad kudhawaad 800 oo qof oo kamid ah barakacayaasha magaalada Garoowe loogu qabaynayey Burjikayaasha Dhuxusha tashiila.
Munaasabadan oo ay soo wada qaban qaabiyey maamulka degmada Garoowe iyo gudiga barakacayaasha magaalada Garoowe waxaa ay ka dhacday xarunta maamulka gobolka Nugaal waxaana lagu qaybinayey Burjikayaasha dhuxusha tashiila oo ay wasaarada Deegaanka iyo hay’ada UNDP oo iskaashanaya ay ka qaybiyeen inta badan degmooyinka Puntland.
Agaasimaha guud ee Wasaarada Deegaanka, Beeraha iyo Isbadalka Cimilada DPL Mudane, Cabdicasiis Nuur Cilmi “Koor” oo ka hadlay munaasabadan ayaa sheegey in ay qaybtinta burjikooyinkan ula jeedaan in la yareeyo isticmaalka dhuxusha iyo in hoos loo dhigo baahida loo qabo dhuxusha badan ee la isticmaalayo taas oo uu sheegey inay bilow u tahay howlgalka Wasaaradda Deegaanka ee ah in la joojiyo guud ahaanba isticmaalka dhuxusha.
Wasiirka wasaarada Deegaanka Prof, Ismaaciil Diiriye Gamadiid oo gabagabadii munasaabada ka hadlay ayaa ugu baaqay in dadka ka faa’iidaysanaya Mashruucan ay ilaaliyaan hantida loo dhiibay waxaana uu sheegey in ay bixin doonaan qaybo kale oo ka casrisan Burjikooyinkan islamarkaasna ay gaari doonaan guud ahaan dhulka Puntlad.